Wednesday December 02, 2020 - 09:58:49 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Caabuqa Covid19 ayaa shalay gummaadkii ugu badnaa ka geystay mid kamida dalalka dhaca waqooyiga qaaradda American iyo Carona Virus uu si xowlli ah ugusii fidayo daafaha caalamka.
dalka Mareykanka shalay waxaa laga diiwaan geliyay dhimashadii ugu badneed abid tan iyo bishii Maarso ee lasoo dhaafay kolkaac oo carona uu gaaray wadankaasi.
Mareykanku xalay fiidkii wuxuu diiwaan geliyay dhimashada in ka badan 2,500 qof oo uu gallaaftay Corona intii lagu guda jiray 24 saac gudahood sida lagu sheegay xog ay daabacday Jaamacadda Johns Hopkins ee taxliilsa arrimaha caafimaadka.
Xogta jaamacadda oo loo tixgeliyo tixraaca raadinta bukaannada iyo dhimashada uu sababay cudurka faafa ee Covid-19 ayaa muujisay dhimashada 2562 ruux iyo in kabadan 180 oo ah kiisaas cusub oo uu cudurku soo ritay.
Markii ugu dambeysay ee tirada dhimashada maalinlaha ah ee Mareykanka ay ka gudubto laba kun iyo boqolaal waxay ahayd dhammaadkii bishii Abriil, xilligaas oo musiibada ay gaarsiisneed meeshii ugu sarreysay waxaase muuqata in halaagga uu hadda Carona ka geysanayo gobollada kala duwan ee mareykanka uu yahay mid ka halis badan dhammaan wixii hore.
Mareykanka oo dhowr toddobaad ka hor laga dareemay koror cusub oo faafa waa waddanka ugu badan ee la diiwaan geliyey dhimashada cudurka loo yaqaan 'corona virus caalami ahaan waxayna dhimashadu ka badan tahay 270,450 oo qof.
Mareykanku sidoo kale waa waddanka ugu horreeya adduunka marka la eego tirada dadka uu ku dhacay Viruska, maadaama tirada la xaqiijiyay ee Covid-19 ay ka badantahay 13.7 milyan oo xaaladood taas oo ka badan shan meelood meel tirada guud ee cudurrada laga diiwaan geliyay adduunka oo dhan (in ka badan 63, 2 milyan oo kiisaas ah) tan iyo markii virus-ka dilaaga ah uu kasoo bilaawday dalka shiinaha dabayaaqadii sanaddii 2019.
Maalintii Talaadada Mareykanka wuxuu jabiyay rikoor cusub marka loo eego tirada bukaannada halista ah ee u baahan isbitaal dhigista maaddaama ay tiradoodu gaareyso 99,000, sida ku cad mashruuca "Covid Tracking", qeyb weyn oo ka mid ah kiisaskan ayaa ku urursan dhowr gobol oo ay kamid yihiin Indiana iyo South Dakota.
Musiibadaan waxay imaanaysaa maalmo kadib markii wadanka Mareykanka laga oogay waxa loogu yeero ciidda iscafinta waxayna khubarada cudurrada faafa ee Mareykanka sheegeen in safaraddii ay sameeyeen malaayiin qof American ah si ay ula dabaal degaan qoyskooda iyo kuwa ay jecel yihiin ay uga sii dartay xaaladda aafada ee dalka ka jirta.
Britain oo noqday dalka Ugu dhimashada badan Carona Virus ee qaaradda Yurub.
Maleeshiyo Beeleed Xasuuq ka geystay gobolka Darfur ee dalka Suudaan.